Fiarakaretsaka eto an-drenivohitra Resy lahatra amin’ny OMAVET
Lavarangana nianjera teny Isotry Olona 7 no tototra tao ambany “beton”
Nitrangana toe-javatra nampalahelo tetsy Isotry ampitan’ny BMH omaly maraina tokony ho tamin’ny 10 ora. Lavarangana amina trano lehibe iray miorina eny an-toerana no nihotsaka tampoka ka nifatratra tamin’ireo mpivarotra kitapo teo akaiky izay tsy nanampo na inona na inona.
40 taona nigadrana tao Nosy lava Hody any amin’ny fianakaviany i Samuel Rakotoarivelo
Tanteraka ara-bakiteny amin-dRakotoarivelo Samuel ilay hira ventesina any am-piangonana hoe : « Afaka aho, afaka ny gadrako…
Alfred Randriamanampisoa “Hahazo isa 10 amin’ny novambra no tanjona”
Hahazo isa 10 amin’ny novambra no tanjona, hoy ny filohan’ny komity mpanatanteraka eo anivon’ny federasionina malagasin’ny baolina kitra, Alfred Randriamanampisoa.
Ady amin` ny kolikoly Hamafisina ny fandraisana fitorohana
Nanatevim-pahalalahana tamin`ny alalan` ny atrikasa fiofanana amin`ny fomba mampahomby ny ady amin`ny kolikoly ny rantsan`ny tetikasa “Ho tantsoroka hahazoam-bokatra” ho an`ny seham-panjakana any amin`ny faritra (PAPSP).
Ministeran’ny Toekarena sy ny Fitantanam-bola Nanome rà maimaimpoana ireo mpiara-miasa
« Izay manome rà, manome Aina ». Nanatanteraka izany an-tsitrapo ireo tompon’andraikitra ambony maro sy ny mpiara-miasa isan-karazany eo anivon’ny Ministeran’ny Toekarena sy ny Fitantanam-bola.
Fivadiham-pitokisana Tratra ilay tompona agence de voyage namitaka
Lehilahy tompona agence de voyage mampiasa fiara Grand Starex miisa dimy no nivadika tamin’ireo olona nivarotany izany. Namidiny avokoa mantsy ireo fiarany ireo ny volana desambra 2019 ka mitentina 50.000.000 Ariary ny vidin’ny iray tamin’izany.
JIRAMA sy ny oniversiten’Antananarivo Hiara-kiasa hanara-maso ny fanjifana tsy ara-dalàna
Hiara-kiasa manomboka izao ny orinasa JIRAMA sy ny oniversité-n’Antananarivo.
Nisy indray ny fihaonana teo amin’ireo solontenan’ny “taxi ville” sy ny kaominina Antananarivo Renivohitra tao amin’ny Lapan’ny tanàna Analakely omaly 26 oktobra 2017.
Nandritra izany no nijoroan’ireo Solontenan’ny Taxi Ville nanao fijerena ifotony teny amin’ny OMAVET vavolombelona fa tsy misy atahorana ny fanaovana fitsirihana eny an-toerana fa ahafantarana ny toetran’ny fiara fotsiny. Misy koa ireo tombontsoa maro amin’ny fanamboarana fiara raha misy tsy mety, toy ny vatan’ny fiara, ny loko, ny saodira izay hita teny an-toerana sady amin’ny sarany mora. Manana safidy manokana anefa amin’ny fanamboraana ny fiara fa tsy voatery ao amin’ny OMAVET. Tapaka kosa fa hantsagana ny Fikambanana na« ASSOCIATION » ahafahana miaro ny asan’ireo “Taxi ville” eto Antananarivo Renivohitra. Nanambara ihany koa i Marc Ravalomanana mpanolotsaina manokana, izay solontenan’ny Ben’ny tanàna fa nazava tamin’ny ireo taxi ny fampiasana ny OMAVET ary resy lahatra izy ireo amin’ny fanaovana « visite de conformité » eny an-toerana. Manomboka izao dia afaka manao « Banc d’Essai » maimaimpoana eny amin’ny OMAVET ny taxi rehetra hatramin’ny volana desambra izao. Kendrena ny tombontsoan’izy ireo ary hanampy ny Ben’ny tanàna Lalao Ravalomanana. Betsaka ny fiarakaretsaka manaiky ny faraha-miasa amin’ny OMAVET, hoy izy. Misy ihany koa anefa ny fitarainan’ireo “taxi”, fa misy mandrahona sy mitoraka ny fiarany ka manao antso avo amin’ireo mpitandro ny filaminana hiaro an’izany.